सरकार आर्थिक नीति को कार्य को एक देशको वित्तीय स्थिरता समर्थन छ। 2009 को संकट अघि संयुक्त राज्य अमेरिका मा यस समारोह विशेष आर्थिक पर्यवेक्षण, पूरा गर्न प्रत्येक व्यक्ति अवस्थामा आफ्नो प्रभाव भएको। सर्वसञ्चित, यो मुद्दा व्यापक दृष्टिकोण को मुख्य विषय थियो वित्तीय को योजना 2009 को गर्मी मा जारी थियो सुधार ओबामा। बिल वित्तीय मान, सुधार को सतत विकासक्रम 2010 मा विकसित गरिएको छ।
को वित्तीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य प्रणाली र शक्ति को सही प्रतिबिम्ब हुन मानिन्छ। धेरै विकसित देशहरूमा, यो विभिन्न स्तर र शरीर यसलाई को राजस्व र व्यय भाग नियन्त्रण व्यायाम को बजेट हुन्छन्।
अमेरिकी वित्तीय प्रणाली मानक तीन मुख्य कार्यहरु गर्नुपर्छ:
सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय वा सेना को लागि पहिलो जिम्मेवार लागि।
अर्को कार्य जनसंख्या र क्षेत्रहरूमा केही खण्डहरूमा बीच आय को redistribution छ, र यस को लागि एक पूर्वर्शत ठीक अमेरिकी वित्तीय प्रणाली थियो। यो सुविधा देश मा एक आरामदायक सामाजिक र आर्थिक जलवायु प्रदान मा तिनीबारे राम्रो प्रतिबिम्बित गरिएको छ।
अन्तमा, तेस्रो कार्य आर्थिक संकट पछि, 20 औं शताब्दीको 30 सेकेन्ड मा विकसित भएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य राज्य अर्थतन्त्रको वृद्धि प्रोत्साहित र व्यापार क्षेत्रको विकास समर्थन गर्न एक उपकरण रूपमा बजेट प्रयोग गर्न छ। आधुनिक अमेरिकी वित्तीय प्रणालीलाई कुशल अर्थव्यवस्था को अवस्थामा सरकार एक विश्वसनीय र प्राकृतिक साझेदार को भूमिका, व्यापार क्षेत्र छैन एक विरोध शक्ति प्ले गर्नुपर्छ भनेर देखाइएको छ।
को budgetary सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका यसको गुणात्मक सुविधाहरू छ। त्यसैले, यो "आर्थिक सङ्घीयता" को सिद्धान्त पालन। राजस्व, व्यय र बजेट बीचको सम्बन्ध - अर्को शब्दमा, त्यहाँ तीन सरकारको प्रणाली प्रभावकारी अन्तरक्रिया छ।
प्रणाली सरकार राजस्व कर र गैर-कर राजस्व, जो देशमा सञ्चालन र, सरकारी खर्च सुनिश्चित गर्न साथै यहाँ रूपमा राजस्व संकलन र व्यवस्थामा बजेट राजस्व को बन्दोबस्त को विधिहरू समावेश गर्नुपर्छ सक्षम हुनेछ को एक सेट हुन्छन्। खर्च को राज्य प्रणाली कांग्रेस मा कार्यकारी शाखा एक पछि शोधन, त्यसपछि बयान (निर्णय) र यसको कार्यान्वयन अधिक अनिवार्य नियन्त्रण संग एक मस्यौदा बजेट तयार हुन्छन्।
"आर्थिक सङ्घीयता" को माथि-उल्लेख सिद्धान्त राजस्व को सरकार आफ्नै स्रोतबाट प्रत्येक स्तर को लागि प्रदान गर्दछ, तर एकै समयमा त्यहाँ बजेट आवश्यक भएमा को appropriations को एक उच्च स्तर को संभावना छ।
अमेरिकी आर्थिक प्रणाली inextricably जोडिएको छ आर्थिक नीति। यो राज्य को budgetary नीति अनिवार्य लिङ्किङ संग आर्थिक गतिविधिहरु पूरा मा डिजाइन र निर्णय-बनाउने प्रतिबिम्बित गरिएको छ। र विपरित - देश को सबै बजेट गतिविधिहरु विकास र समग्र आर्थिक रणनीति को राज्य को दिशा मा विशेषज्ञहरु द्वारा कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ।
अमेरिकी मौद्रिक प्रणाली राज्य को वित्तीय प्रणाली को भाग हो र अमेरिका को केन्द्रीय बैंक र वित्त मंत्रालय द्वारा यसको विनियमन द्वारा विशेषता छ।
20 औं शताब्दीको 70s मा, फेडरल रिजर्व सिस्टम को मुख्य कार्य यसरी देश मा मौद्रिक परिसंचरण को स्थिरता सुनिश्चित र एक रूप डलर को बलियो, एक कम स्तरमा मुद्रास्फीति समर्थन थियो आरक्षित मुद्रा।
1981 देखि, सरकार मना द्वारा मौद्रिक परिसंचरण को सख्त विनियमन सञ्चालन थाले मुद्रा आपूर्ति र ब्याज दर बढ्छ। यी गतिविधिहरु मार्फत मुद्रास्फीति को दर मा एक कमी र अन्य मुद्राहरू तुलनामा यसको मूल्य मा डलर वृद्धि को बलियो बनाउँछ हासिल गरेका थिए।
रूस को ऋण बन्द लेख्नुहोस्: धेरै अन्य देशहरूमा र किन गर्न बन्द लिखित
अर्थव्यवस्था को उद्देश्य। अर्थव्यवस्था र समाजमा यसको भूमिका
उच्चतम जनसंख्या घनत्व संग देशहरू: मूल्याङ्कन, विशेष गरी
कति एक हप्तामा घण्टा? को काम सप्ताह को लम्बाइ बारेमा
विद्रोह को क्षेत्र को योजना पुनर्निर्माण (पर्म)
फेडरल रिजर्व के हो? यो अमेरिकी केन्द्रीय बैंक, वा "गोप्य समाज" छ
बिरालो फ्लिया: वर्णन, नियन्त्रण र रोकथाम को विधिहरू
रजाई टाल्ने - मूल, सुन्दर, असामान्य
Kanova एण्टोनियो - नयाँ Phidias
पदोन्नति लेख साइट - सबै खोज फिल्टर मार्फत पर्ची गर्न तरिका
स्वतन्त्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका घोषणापत्र वा ठूलो राष्ट्रको इतिहास